ယခုအခန်းတွင် ကေ-၉ကို အသုံးပြု၍ လျှို့ဝှက်ကုဒ်များအဖြစ်ပြောင်းလဲထားသော (encrypted) အီးမေးလ်များ ပေးပို့ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် ထပ်မံလိုအပ်သည့် APG အပလီကေးရှင်းအား install လုပ်ခြင်းကိုဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။
APG နှင့် K-9 အား ဆက်တင်ပြုလုပ်ခြင်းအကြောင်းမပြောမှီ PGP နည်းပညာအသုံးပြုပြီး အီးမေးလ် encryption ပြုလုပ်ခြင်းအကြောင်းကို ဦးစွာရှင်းပြလိုသည်။
PGP ကိုအသုံးပြုပြီး အီးမေးလ်များ ဖတ်ခြင်းနှင့်ပေးပို့ခြင်းများအတွက် ကီးနှစ်စုံလိုအပ်ပါသည်။ တစ်စုံမှာ ပေးပို့သူနှင့် စာလက်ခံသူနှစ်ဦးလုံးအတွက် တကိုယ်ရည်သုံးရန် (လျှို့ဝှက်) ကီး (private key) နှင့် နောက်ထပ်တစ်စုံမှာ အပြန်အလှန်ပေးပို့ရာတွင်အသုံးပြုရမည့် အခြားသူများမှအသုံးပြုနိုင်ရန်ထားရှိသော ကီး (public key) တို့ဖြစ်သည်။
ထိုကြောင့် လျှို့ဝှက်ကုဒ်သို့ပြောင်းလဲထားသောစာတစ်စောင်ကို ပေးပို့ရန်အတွက် မိမိပို့လိုသောသူ၏ public key ကိုသိရှိရန်လိုအပ်သည်ဖြစ်ကြောင်း ပုံတွင်ပြထားချက်အတိုင်း တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။
အီးမေးလ်များလိမ်လည်ပေးပို့ခြင်းသည် အလွန်လွယ်ကူပါသည်။ ထိုသို့ လိမ်လည်ပေးပို့ခံရခြင်းကို တန်ပြန်ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် အီးမေးလ်များထဲတွင် လက်မှတ်ထိုး၍ ပေးပို့နိုင်ရန် PGP ကို အသုံးပြုသည်။ ထိုသို့ အီးမေးလ်တွင်လက်မှတ်ထိုးခြင်းဖြင့် ပေးပို့သူမှ မိမိထံ အမှန်တကယ်ပေးပို့ခြင်း ဟုတ် မဟုတ်ကို စစ်ဆေးသိရှိနိုင်ရန်အတွက် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အောက်ပါလင့်တွင် ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရယူနိုင်ပါသည်။ (more background information about the process here.)
OpenPGP သည် open source အပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး လျှို့ဝှက်ကုဒ်များအဖြစ်ပြောင်းလဲရာတွင် PGP method ကိုအသုံးပြုထားသည်။ PRISM ထောက်လှမ်းရေးပရိုဂရမ်အကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးသည့်နောက်တွင် လူအများလက်ခံလာကြသည်မှာ open source solutions များသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကာကွယ်နိုင်ရန် အသုံးပြုရာ၌ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟု ဖြစ်သည်။
Open source solutions တွင် လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းကန်ထရိုက်များ ၀င်ရောက်ရှာဖွေစစ်ဆေးနိုင်ရန် ဂယ်ပေါက်ဖွင့်ပေးထားသိလိုဖြစ်နေသည့် အခြေအနေမျိုး ဖြစ်နိုင်ချေ အတော်ကြီးကိုနည်းပါးပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ၄င်း၏ source code များကို အသုံးပြုသူများမှ ၀င်ရောက်စစ်ဆေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မိမိတို့အနေဖြင့် ၄င်းကုဒ်များကို နားလည်နိုင်စွမ်းမရှိသော်လဲ နားလည်တတ်ကျွမ်းသော အသုံးပြုသူများရှိပါသည်။ ထိုနားလည်သူများမှ ဤဆော့ဝဲအား အမြဲ ပြန်လည်စစ်ဆေး ကြည့်ရှုနေသောကြောင့် ဆော့ဝဲအတွင်း၌ မိမိကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်သော ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သော အရာများတည်ရှိပါဝင်နေရန်မှာ မဖြစ်နိုင်ပေ။
K-9 တွင် အီးမေးလ်ကို လျှို့ဝှက်ကုဒ်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန် APG ကို ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း
ကေ-၉ အားထည့်သွင်းရန်ပြုလုပ်သည့်နည်းလမ်းများအတိုင်း APG အပလီကေးရှင်းကို မိမိစက်အတွင်း ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရန် Play store သို့မဟုတ် F-droid မှရယူပါ။
အက်ပလီကေးရှင်း၏ App Permissions များကို ကြည့်ရှုပြီးပါက Accept ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အန်းဒရွိက် apps များနှင့် လုံခြုံရေး (security) နှင့်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာများကို ပိုမိုသိရှိလိုပါက လေ့လာနိုင်ရန် အရင်းအမြစ်များစွာ အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရှိပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့် အပလီကေးရှင်းတခုသည် ၄င်းကောင်းစွာလည်ပတ် အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်ထက်ပိုသည့် အခြားခွင့်ပြုချက်များ တောင်းခံခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်မဖြစ်သင့်ပေ။
PGP ကီးတစ်စုံဖန်းတီးရန်အတွက် APG အပလီကေးရှင်းကို ဦးစွာဖွင့်ပေးရပါမည်။ ထို့နောက် ကေ-၉ ကို ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ရန် အကြံပြုထားသော အဖွင့်မိတ်ဆက်စာကို တွေ့မြင်ရပါမည်။ ထို့နောက် OK ကို ကလစ်နှိပ်ပေးရပါမည်။
ထို့နောက် စတင်ပြုလုပ်ရန်အတွက် More Action သို့မဟုတ် မိမိဖုန်းရှိ Menu ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
စတင်အသုံးပြုနိုင်ရန် ကီးတစ်စုံကို ပြုလုပ်ရပါမည်။ အခြားနည်းလမ်းတခုခုဖြင့် PGP ကိုအသုံးပြုဖူးပါက မိမိထံတွင် အသုံးပြုရန်ကီးတခုဖန်တီးပြီးသား ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ Magage Secret Keys ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။
ထို့နောက် More Actions မီနူးကို ထပ်မံရွေးချယ်ပေးရပါမည်။ မိမိတွင် ဖန်တီးပြီးသားကီး (key) တစ်စုံရှိပြီးဖြစ်ပါက Import Keys ကို ကလစ်နှိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး၊ မရှိသေးပါက Create Key ကို ရွေးချယ်ပေးပါ။
ထို့နောက် လျှို့ဝှက်စကားစု (pass phrase) သို့မဟုတ် စကားဝှက် (password) ကိုထည့်သွင်းပေးရမည်ဖြစ်ပြီး၊
Set Pass Phrase ဆိုသည့်နေရာတွင် မိမိရွေးချယ်ထားသော စကားဝှက်ကို နှစ်ကြိမ်ထည့်သွင်းပေး၍ OK ကို ကလစ်နှိပ်ရပါမည်။
ထို့နောက် User ID ဘေးရှိ (+) လက္ခဏာပုံအား ကလစ်နှိပ်၍ အမည် (Name) နှင့် အီးမေးလ် ကိုထည့်သွင်းပေးပါ။
မိမိအနေဖြင့် Keys ဘေးရှိ အပေါင်းလက္ခဏာပုံအား ကလစ်နှိပ်၍ ကီး တစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
အကြံပြုလိုသည်မှာ RSA ၏ default setting ကို မူလအတိုင်းထားပြီး key size ကိုဖော်ပြပေးထားသည့် ၁၀၂၄ ထက် နှစ်ဆတိုး၍ ၂၀၄၈ သို့ထားပေးရန်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် မိမိအသုံးပြုမည့် ကီး၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ကို သတ်မှတ်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၄င်းကီးကို မည်သို့ အသုံးပြုမည်ဆိုသည်ကို ရွေးချယ်ပေးရပါမည်။
Usage ဆိုသည့်နေရာရာတွင် Sign and Encrypt ကိုရွေးချယ်ရပါမည်။
ထို့နောက် Save ကိုကလစ်နှိပ်ပြီးပါက အသုံးပြုရန်ကီးတစ်စုံဖန်တီးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပြီး၊
Secret keys စာရင်းတွင် မိမိ၏ ကီးအသစ်ကိုတွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။
မိမိ၏ Public keys ကို စီမံခန့်ခွဲလို၍ ရှာဖွေပါကလဲ မိမိ၏ ကီးအား စာရင်းပြုဖော်ပြပေးထားမည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤကီးသည် မိမိလက်ခံရယူမည့် encrypted mails များ ပေးပို့မည့်သူများထံ ပေးအပ်ထားရန်လိုသောကြောင့် လွန်စွာသုံးဝင်သည်။
အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများမှ ကီး (Keys) များသွင်းယူခြင်း
မိမိတွင် ယခု app ဆီသို့ ပြောင်းပို့အသုံးပြုလိုသော Thunderbird ကဲ့သို့သော အခြား အီးမေးလ်အပလီကေးရှင်းများတွင် အသုံးပြုနေသော ကီးများ ရှိကောင်းရှိနေနိုင်ပါသည်။ ရှိခဲ့ပါက ထိုကီးများကို AGP ထဲသို့ ပြောင်းပို့သုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြောင်းပို့နိုင်ရန် asc သို့မဟုတ် pgp ဖိုင်ထဲသို့ မိမိ၏ကီးများကို ထည့်သွင်းပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့ကို မိမိဖုန်း၏ stoage အတွင်းသို့ USB သို့မဟုတ် Bluetooth တဆင့် ရွှေ့ပြောင်းပေးရမည်ဖြစ်သည်။
ဖိုင်များကို ပြောင်းရွေ့နိုင်ရန် Manage Private မီနူးထဲမှ Import Keys ကိုရွေးချယ်ရပါမည်။
ထို့နောက် မိမိကီးကို ထားရှိမည့်နေမည့်နေရာကို ရှာဖွေပြီး ၄င်းကို ရွေးချယ်ပေးပါ။
ပြောင်းရွေးခြင်းပြီးစီးပါက ကီး ကို ဖျက်ပြစ်ချင်ဖျက်ပြစ်နိုင်ရန် option ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ထို့သို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် မိမိ၏ ကီးကို Private Key မီနူးထဲသို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးမည်ဖြစ်ပြီး encryption အတွက်အသုံးပြုရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေမည်ဖြစ်သည်။
Private key ဖြင့် စတင်လုပ်ဆောင်မည်ဆိုပါက ရွှေ့ပြောင်းပေးပို့မည့် မည်သည့် public keys အတွက်မဆို ဖော်ပြခဲ့ပြီးသော လုပ်နည်းကိုင်နည်းများအတိုင်း ထပ်မံလုပ်ဆောင်ပေးရန်လိုပါသည်။
Public Keys များကို အပြန်အလှန်လဲလှယ်ခြင်း
Encrypted လုပ်ထားသောစာများကိုပေးပို့ရန်နှင့် လက်ခံနိုင်ရန် မိမိအနေဖြင့် အခြား အီးမေးလ်အသုံးပြုသူများနှင့် public keys များကို အပြန်အလှန်လဲလှယ်ပေးအပ်ထားရန်လိုသည်။
ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် ပထမဆုံးအနေဖြင့် Manage Public Keys ထဲတွင်ရှိသော options မှ Export Keys ကိုရွေးချယ်ပေးပြီး မိမိကီးအား ပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် စာသားဖိုင် (text file) အနေဖြင့်ရှိနေသည့် ပေးပို့လိုက်မည့်ဖိုင်ကို သိမ်းဆည်းရန်နေရာကိုရွေးချယ်ရပါမည်။
ထို့နောက် PGP အသုံးပြုသော မိမိ၏အဆက်အသွယ်တစ်ဦးဦးထံသို့ public key ကို ပို့ပေးပြီး၊ encrypted အီးမေးလ်ပေးပို့ခိုင်းပါ။
မိမိအနေဖြင့် စမ်းသပ်အသုံးပြုလိုသော်လည်း မည်သူတွေက encryption သုံးသည်ကိုမသိပါက encryptedenigma@aktivix.org သို့ မိမိ၏ public key ကိုထည့်သွင်းပေးပြီး အီးမေးလ်ပို့၍ စမ်းသပ်နိုင်ပါသည်။
ဖော်ပြပါကီးများအား လိုက်လံရှာဖွေရမည့်ကိစ္စမှာ လွယ်ကူစွာလုပ်နိုင်သော အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် မိမိကီးများကို ဆွဲတင်ရန် (upload) နှင့် အခြားသူများ၏ ကီးများကို ဒေါင်းလုဒ်ရယူရန် (download) ရယူခြင်းများကို လွယ်ကူစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ကီးဆာဗာများထားရှိပေးထားပါသည်။
ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် APG ၏ အဓိကစာမျက်နှာရှိ options menu ထဲတွင်ရှိသော Key Server ကိုရွေးချယ်ပေးပြီး၊
မိမိဆက်သွယ်လိုသူ၏ အီးမေးလ်ကို ရေးသွင်းပေးပြီးနောက် Search ကို ရွေးချယ်ပေးပါ။
ထို့နောက် ကီးသည် ကီးဆာဗာပေါ်တွင်ရှိနေသည်ဆိုပါက မိမိထံ အကြောင်းပြန်ကြားပေးပို့လာသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
လက်ယာဘက်တွင်ဖော်ပြပေးလာမည့် နံပါတ်များသည် မိမိ၏ Key ID ဖြစ်ပြီး၊ မိမိအနေဖြင့် ကီးအစစ်အမှန်ကို အသုံးပြုနေခြင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုလည်း လွယ်ကူလျင်မြန်စွာစစ်ဆေးနိုင်သည့် နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် တခါတရံ၌ အီးမေးလ်လိပ်စာတခုအတွက် ကီးများတခုထက်မက ရှိနေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မိမိဆက်သွယ်လိုသူ၏ ကီးကို ရယူပြီးပြီဆိုပါက မိမိအနေဖြင့် ကေ-၉ ကိုအသုံးပြု၍ အီးမေးလ်များကို လွယ်ကူစွာပေးပို့နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
မက်ဆေ့ခ်ျရေးသားသည့်အခါ၌ APG ကို ထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်၍ မြင်တွေ့နေရပြီဖြစ်သော Encrypt ၏ ဘေးတွင်ရှိနေသည့် လေးထောင့်ကွက်လေးအတွင်း၌ အမှန်ပုံလေး ပေါ်အောင်လုပ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ တခုသိရှိထားရမည်မှာ PGP public key ရှိသူများထံသို့သာ encrypt မေးလ်များပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မိမိအီးမေးလ်သို့ ၀င်ရောက်ရန် Sign ဘောက်စ်ကို ရွေးချယ်ပြီး မိမိအသုံးပြုမည့် ကီးကိုရွေးပေးပါ။ ကေ-၉ အသုံးပြု၍ လျှို့ဝှက်ကုဒ်ပြောင်းလဲရာတွင်ရှိနေသော အကန့်အသတ်များ
ကေ-၉ သည် encryption လုပ်ရာ၌ အခြား tool တခုဖြစ်သော APG ကို တွဲဖက်အသုံးပြုရသည်ဖြစ်သောကြောင့် လောလောဆယ်ကာလတွင် အကန့်အသတ်အချို့ ရှိနေပါသည်။. ပူးတွဲဖိုင်အား လျှို့ဝှက်ကုဒ်သို့ပြောင်းမပေးနိုင်ခြင်း (သို့) ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်သော (MIME) အီးမေးလ်အဖြစ်အသုံးပြု၍မရခြင်း
Encryption ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တခုလုံးသည် အီးမေးလ်တွင် ရေးထည့်သည့် စာသားများကိုသာ ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ၄င်းကို inline encryption ဟုခေါ်သည်။ အခြား အီးမေးလ် client များအနေဖြင့် ပူးတွဲပေးပို့သော ဖိုင်ကိုပါ encryption လုပ်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုပေးသော်လည်း လက်ရှိအချိန်တွင် K-9 နှင့်APG တို့တွင် ပြုလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်သေးပါ။
ပူးတွဲဖိုင်များကို encryption ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် အီးမေးလ်များနှင့် ပူးတွဲဖိုင်များကို pgp/mime ဖိုင်အမျိုးအစားများအဖြစ်ပြောင်းလဲ၍ အတူတကွ ပေးပို့ခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိ၏မေးလ် client က ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးလုပ်ဆောင်ပေးပါက အသုံးပြုသင့်သည့်နည်းလမ်းခုဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်ခွင့်ရရန် မကြာခဏတောင်းဆိုမှုများရှိသောကြာင့်လည်း ဤကဏ္ဍကို ကေ-၉တွင် မကြာမှီ အသုံးပြုနိုင်လာဖွယ်ရှိပါသည်။ Guardian project အနေဖြင့်လဲ ဤအခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သတ်ပြီး အန်းဒရွိုက်များအတွက် GnuPG client ကို ဖန်တီးလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီး၊ ၄င်းတို့ လုပ်ဆောင်နေသည့် project အား K-9 နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်လုပ်ဆောင်ပေးလ်ိမ့်မည်ဖြစ် သည်။ မိတ်ဆက်ခြင်း
ဤအပိုင်းတွင် စာများကို ဖတ်ရှုခြင်း၊ ရေးခြင်း နှင့် ဖျက်ခြင်းများကို ဖော်ပြထားသည်။
အီးမေးလ်များကို ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ကေ-၉ ကိုဖွင့်၍ မိမိဖတ်လိုသော စာများပါသည့် အီးမေးလ်ဖိုင် ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ မက်ဆေ့ခ်ျအသစ်များကို ဖတ်ရှုလိုသည်ဆိုပါက Unified Inbox ကို ရွေးချယ်ပါ။
ပုံတွင် ရွေးချယ်ရန်ဖိုင်အမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး ဖိုဒါတခုခြင်းစီအတွင်းရှိ မိမိမဖတ်ရှုရသေးသည့်စာများ၏ အရေအတွက်ကို ဖော်ပြထားသည်ကိုလည်းတွေ့ရမည်။
မိမိတို့အနေဖြင့် ဖိုဒါတခုခုကိုရွေးချယ်လိုက်ပါက ၄င်းထဲတွင် အီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများ၏စာရင်းကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ မက်ဆေ့ခ်ျ၏ဘေးရှိ အပြည့်ရေးချယ်ထားသော စက်ဝိုင်းသည် မဖတ်ရှုရသေးသည့်စာများကိုဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အီးမေးလ်၏အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်ကို ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြပေးထားသည်။
မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖတ်ရန် ၄င်းမက်ဆေ့ခ်ျ၏ အဓိကအပိုင်းနေရာကို ရွေးချယ်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါသည်။
ထို့နောက် ကေ-၉ က မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။ ကေ-၉သည် HTML ဖြင့် စီစဉ်ဖွဲ့စည်း (HTML formatting) ထားသည့်မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့် ပုံများ အပါအ၀င် တော်တော်များများသော အီးမေးလ်များကို ဖော်ပြပေးနိုင်သည်။
အခြား ပြုလုပ်နိုင်သော ရွေးချယ်စရာ (options) များကို အပေါ်ရှိခေါင်းစဉ်ဘားတန်း (header bar) တွင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
ဘားတန်းပေါ်ရှိ မျှားပုံစံကီးခလုတ်များကိုရှေ့နောက်ရွေ့လျှား၍ မိမိ၏ဖိုဒါထဲတွင်ပြထားသော မက်ဆေ့ခ်ျများကို လိုသလိုဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အမှိုက်ပုံးပုံသဏ္ဍန်ပြထားသော ရုပ်ပုံကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် မိမိဖျက်လိုသောစာများအား အမိူက်ဖိုဒါထဲသို့ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ပြီးနောက် ဖော်ပြထားသည့်စာရင်းထဲရှိ နောက်မက်ဆေ့ခ်ျတခုကိုထပ်သွားနိုင်သည်။
အကယ်၍ ဖိုဒါများဆီသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလိုပါက စက်ရုပ်ခွေးပုံသဏ္ဍန် ကေ-၉ အိုင်ကွန်ရုပ်ကိုနှိပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
မိမိအကောင့်များ၏စာရင်းကိုဖော်ပြပေးထားသောနေရာသို့ ပြန်ရောက်လိုပါကလည်း စက်ရုပ်ခွေးပုံလေးကို သာရွေးချယ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
အီးမေးလ်အသစ်များထပ်မံရောက်ရှိ မရှိကိုသိရှိနိုင်ရန် မိမိအကောင့်အား အသစ်ပြန်လည်ပြပေးစေလိုပါက မက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖော်ပြပေးသည့် Inbox ဘားတန်းပေါ်မှ refresh အိုင်ကွန်ပုံကို ကလစ်နှိပ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
Refresh အိုင်ကွန်သည် မိမိအကောင့်ဝင်းဒိုးတွင်ဆိုပါက အကောင့်များအားလုံးကို ပြန်လည်၍အသစ်စစ်ဆေးခြင်း (refresh) လုပ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
မိမိအီးမေးလ်အား Refresh လုပ်ရန်အခြားနည်းလမ်းတခုမှာ မိမိ၏ Inbox အတွင်းရှိ မည်သည့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုမဆို ကြိုက်ရာရွေးချယ်၍ ဖန်သားပြင်(Screen) ၏အောက်ခြေသို့ ဖိဆွဲလိုက်ပါက Release to refresh ဆိုသည်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး၊
၄င်းဖိဆွဲထားခြင်းကိုလွတ်ပေးလိုက်ပါလျင် ကေ-၉ က ထပ်မံရောက်ရှိနေသော မက်ဆေ့ခ်ျအသစ်များကို တင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ အီးမေးလ်ပါရှိသောပူးတွဲဖိုင်များအား ဖတ်ရှုခြင်း
အီးမေးလ်နှင့်အတူ ပူးတွဲပေးပို့လိုက်သောဖိုင်များအား ဖတ်ရှုနိုင်ရန် Show attachments ဆိုသည့် ဗောက်စ် ကိုရွေးချယ်ပေးရပါမည်။
ထို့နောက် မိမိအနေဖြင့် ပူးတွဲပါလာသောဖိုင်နှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး ပူးတွဲပေးပို့လိုက်သောဖိုင်သည် ပုံတစ်ပုံဖြစ်နေပါက ၄င်းပုံ၏ အကြိုမြင်ကွင်းပုံ (preview) ကိုတွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ပူးတွဲပါဖိုင်အား ဖွင့်ကြည့်ရန် သို့မဟုတ် သိမ်းဆည်းရန် (Open or Save) ဟုမေးသည့် ရွေးချယ်ရန်တစ်ခုခုကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
ကေ-၉ အပလီကေးရှင်းထဲ၌ မိမိရောက်ရှိနေရာအပေါ်မူတည်၍ အီးမေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်စောင်ကို ရေးသားရန်အတွက် နည်းလမ်းပေါင်းများစွာရှိသည်။
မိမိစက်မျက်နှာပြင် (Screen)၏ အရွယ်အစားပေါ်မူတည်၍လည်း အချို့ options (ရွေးချယ်စရာများ) များကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ မိမိလက်ရှိဖတ်နေသော အီးမေးလ်အား အကြောင်းပြန်ကြားလိုပါက အပေါ်ဘားတန်းပေါ်ရှိ Reply ပုံအိုင်ကွန် (လေးထောင့်ကွက်အတွင်းရှိ နှစ်ထပ်နောက်ပြန်မျှားကောက်ပုံ) ကိုကလစ်နှိပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ Reply အိုင်ကွန်ပုံအားမမြင်တွေ့ရပါက စခရင်၏ ဘယ်ဘက်ထောင့်အပေါ်ရှိ More Actions အိုင်ကွန် အားရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၄င်းထဲမှ Send ကိုရွေးချယ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ Send ကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့် နောက်ထပ် Reply၊ Reply all၊ Forward နှင့် Share စသည်ဖြင့် ထပ်မံရွေးချယ်စရာများ (options) အား ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။
Share option သည် မိမိအန်းဒရွိုက် (Android)အတွင်းရှိ အခြား apps များထံသို့ အီးမေးတွင်ပါရှိသောစာသားများအား မျှဝေပေးရန်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာ options များကိုလည်း ဖော်ပြပေးထားသည်။
Reply သည် မိမိထံ အီးမေးလ်ပေးပို့လိုက်သူဆီသို့ အကြောင်းပြန်ပေးခြင်းကိုပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ Reply all သည် မိမိနည်းတူ အီးမေးကိုလက်ခံရရှိနိုင်သူအားလုံးထံသို့ အကြောင်းပြန်ပေးခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ Forward သည် မိမိရရှိသောအီးမေးလ်ပါအကြောင်းအရာများကို အခြားသူတစ်ဦးဦးထံပေးပို့နိုင်စေရန် လုပ်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
အီးမေးလ်အသစ်များရေးသားခြင်းမှာ ရွေးချယ်စရာသုံးခုကိုအသုံးပြု၍ အီးမေးလ်ပေးပို့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အလားသဏ္ဍာန်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
အီးမေးလ်အသစ်တစ်စောင်ရေးသားရန် ဖိုဒါဝင်းဒိုး (Folder Window) ရှိ မက်ဆေ့ခ်ျ်ရေးသားရန် (compose message) ဆိုသည့် (အပေါင်းလက္ခဏာနှင့်စာအိပ်ပုံ) အိုင်ကွန်ပုံလေးကို ကလစ်နှိပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
Inbox အတွင်းမှနေ၍ မက်ဆေ့ခ်ျအသစ်ပေးပို့မည်ဆိုပါက More Action အိုင်ကွန် ကို နှိပ်ပါ။ ထို့နောက် compose ကိုရွေးချယ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
ထပ်မံတွေ့ရှိရမည့် စခရင်မျက်နှာပြင်မှာ Compose ၀င်းဒိုးဖြစ်သည်။
၄င်းဝင်းဒိုး၌ တွေ့ရှိရမည့် options များမှာ To, Subject နှင့် Message text များဖြစ်ပြီး TO ဆိုသည့်နေရာမှာ မိမိပေးပို့လိုသောစာကို ပေးပို့နိုင်ရန် အီးမေးလ်လိပ်စာများရေးရန်နေရာဖြစ်ပြီး၊ Subject နေရာသည် မိမိအီးမေးလ်အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်ကို ရေးသားရန်နေရာဖြစ်သည်။ Message text တွင် မိမိရေးသားမည့်အကြောင်းအရာများကို ရေးသားရမည်ဖြစ်သည်။
တစ်စုံတဦးထံသို့ ရိုးရိုးစာတစ်စောင်ပေးပို့ရန် ဖော်ပြပါ options များကို ရေးသွင်းဖြည့်စွက်ပြီးနောက် ဖန်သားပြင်ပေါ်ဘယ်ဘက်ရှိ လက်ယာဘက်သို့ဦးတည်ထားသော မျှားခေါင်းပုံဖြစ်သည့် send mail အိုင်ကွန်ကိုရွေးချယ်နှိပ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
Compose ၀င်းဒိုး၏အပေါ်ဘက်လိုင်းပေါ်တွင် အခြားအသုံးဝင်သော အိုင်ကွန်များလည်းရှိသည်။ ထိုအထဲမှ လူနှစ်ယောက်ထပ်ထားသည့်ပုံအိုင်ကွန်ကို နှိပ်လိုက်ပါက အီးမေလ်းပို့ရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူသက်သာစေနိုင်မည့် အခြား options များကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
ထို options များထဲတွင် CC နှင့် BCC ဆိုသည့်နေရာများကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၄င်းနေရာများတွင် အီးမေးလ်လိပ်စာများကို ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ CC ဆိုသည်မှာ ၄င်းနေရာတွင်ရေးထည့်ထားသည့် အီးမေးလ်ပိုင်ရှင်သည် အဓိက မေလ်းလက်ခံသူမဟုတ်ကြောင်းနှင့် ထိုသူ့ထံမှ ပြန်စာကိုမျော်လင့်မထားပဲ အီးမေးလ်ပါအချက်အလက်များသည် ထိုသူ့အတွက်အသုံးဝင်နိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ထိုသူအားထည့်သွင်းပေးပို့ထားခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလို သည့် သဘောဖြစ်သည်။
BCC သည်လည်း ၄င်းနည်းတူပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤနေရာတွင် B သည် blind ကိုကိုယ်စားပြုပြီး ကွယ်ဝှက်ထားသည့်သဘောဖြစ်သောကြောင့် အခြားမေးလ်လက်ခံရရှိသူများအနေဖြင့် BCC နေရာတွင် ပါရှိသည့်သူများ (အီးမေလ်းလိပ်စာများကို) ကို မသိနိုင်ပေ။
၄င်းအီးမေးလ်လိပ်စာများထည့်သည့်နေရာ၏ယာဘက်တွင် လူပုံနှင့်အပေါင်းလက္ခဏာ ပုံအိုင်ကွန်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၄င်းသည် မိမိထည့်သွင်းပေးပို့လိုသည့်လူများ၏ အီးမေးလ်များကို ထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
ထိုအိုင်ကွန်ပုံကို နှိပ်ပြီးပါက မိမိဆက်သွယ်ပေးပို့လိုသူများကို မိမိ၏ contact list မှ ရွေးချယ်ပေးခြင်းဖြင့် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ထိုသူများကို မိမိရွေးချယ်ထည့်သွင်းလိုက်သည့် အီးမေလ်းလိပ်စာနေရာများတွင် တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
အီးမေလ်းအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရရှိသည့်အားသာချက်တစ်ခုမှာ မည်သည့် ဖိုင်အမျိုးအစားကိုမဆို မိမိပေးပို့လိုသူထံသို့ ပူးတွဲဖိုင် (attachment) အဖြစ် မက်ဆေ့ခ်ျနှင့်အတူ ပေးပို့နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပေးပို့နိုင်ရန် စက္ကူညှပ်ကလစ် ပုံအိုင်ကွန်ကို ကလစ်နှိပ်ရွေးချယ်ရမည်။
မိမိအန်းဒရွိုက် (Android) တွင် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းထားခြင်း (configuration) ပေါ်မူတည်၍ မိမိ၏ ဖုန်း သို့မဟုတ် သင်ပုန်းကွန်ပျုတာ (Tablets)ထဲမှ ဖိုင်များကိုရွေးချယ်ရန် အမျိုးမျိုးသော ရွေးချယ်စရာ (options) များကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
မိမိ ပူးတွဲပေးပို့လိုသော ဖိုင်ကို ရွေးချယ်ရယူရန် File Manager သို့မဟုတ် အလားတူ အပလီကေးရှင်း (Application) ကိုသုံးရမည်။
မိမိ၏ ဖိုင်များကို ပုံမှန်အားဖြင့် ဖုန်းတွင်းပါရှိသည့် internal SD ကဒ် သို့မဟုတ် ထပ်မံထည့်သွင်းထားသော external SD ကဒ်ထဲ၌တွေ့နိုင်သည်။ မိမိရိုက်ယူထားသော ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို ပူးတွဲပေးပို့လိုပါက ၄င်းပုံသည် မိမိ၏ (ဖိုင်မန်နေဂျာရှိ) DCIM အခန်း (folder) ၌ရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဒေါင်းလုပ်ဒ်ရယူထားသောဖိုင်ဖြစ်ပါက download ဖိုင်ထဲတွင်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ မိမိဖုန်းအတွင်းရှိဖိုင်များနှင့်ပတ်သက်၍ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုသိပ်မရှိပါက အနည်းငယ်လေ့လာထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
မိမိပူးတွဲလိုသောဖိုင်ကို ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၄င်းဖိုင်ကို မိမိ၏မက်ဆေ့ခ်ျတွင် ပူးတွဲထားပြီးဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရမည်။
အီးမေးလ်အားပေးပို့သောအခါ၌ ပေးပို့နေကြောင်း အသိပေးချက် (notification) ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
ဖတ်ရှုလျက်ရှိသော အီးမေးလ်အားဖျက်ပစ်လိုပါက အမှိုက်ပုံးပုံအိုင်ကွန် (trash bin) ကို နှိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး၊
တချိန်တည်းတွင် မေးတစ်စောင်ထက်ပို၍ ဖျက်ပစ်လိုပါက ဖိုဒါတစ်ခုခုအတွင်းရှိ မက်ဆေ့ခ်ျများကို စာရင်းပြုဖော်ပြပေးထားသောနေရာမှ ဖျက်ရမည်ဖြစ်သည်။
ပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ပထမဆုံးပြထားသည့်အီးမေးလ်အားဖျက်လိုပါက မက်ဆေ့ခ်ျ၏ လက်ဝဲဘက်ထောင့်ရှိနေရာအား သေချာစွာနှိပ်၍ရွေးချယ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
ထိုအခါ လေးထောင့်ကွက်ကလေးအတွင်း၌ အမှန်ခြစ်ထားသည့်ပုံပေါ်လာသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ခေါင်းစည်းဘားတန်း (header bar) တွင် တစ်ခုရွေးချယ်ထားပြီး (1 Selected) ဟုဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် မိမိဖျက်လိုသော အခြားမက်ဆေ့ခ်ျများကိုဆက်လက်ရွေးချယ်သွားရမည်ဖြစ်သည်။
ယခုအခါတွင် မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုကို ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့် ထပ်မံဖျက်လိုသော စာများအတွက် အကျဉ်းချူပ်ဖော်ပြပေးထားသော မက်ဆေ့ခ်ျများ၏ မည့်သည့်နေရာကိုမဆို နှိပ်၍ ရွေးချယ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ရွေးချယ်ထားပြီသော မက်ဆေ့ခ်ျများကို ဖျက်ပစ်ရန် delete သို့မဟုတ် trash bin အိုင်ကွန်ကို တို့ထိရွေးချယ်ပေးရမည်။ ထိုအခါ ဖျက်လိုက်သောမက်ဆေ့ခ်ျမျာသည့် မိမိအကောင့်ရှိ trash ဖိုဒါထဲသို့ ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။
မိမိ၏စာများကို စီမံနိုင်ရန် အသုံးဝင်လှသော အခြား အိုင်ကွန်များလည်းရှိသေးသည်။ စာအိပ်ပုံအိုင်ကွန်သည် မိမိရွေးချယ်ထားသော မက်ဆေ့ခ်ျများအား ဖတ်ပြီးသား သို့မဟုတ် မဖတ်ရသေးသည့်စာ စသည်ဖြင့်သတ်မှတ်ရွေးချယ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
မက်ဆေ့ခ်ျသုံးခုထပ်ထားသည့်ပုံအိုင်ကွန်သည် မိမိရွေးချယ်ထားသော မက်ဆေ့ခ်ျများအား မှတ်တမ်းတင်သိမ်းဆည်းရာနေရာ သို့ မော်ကွန်းတိုက် (archive) ဖိုဒါသို့ ပြောင်းရွေးထားပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊
စတုရန်းပုံ More Actions အိုင်ကွန်သည် အခြားရွေးချယ်စရာ options များကို ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့ကို အခြားအခန်းတွင်ဖော်ပြပေးပါမည်။
ယခုအခန်းတွင် အီးမေးလ်များနှင့် ဖိုဒါများအား စီမံကိုင်တွယ်ခြင်း၊ ကေ-၉၏ အခြား configuration များပြုလုပ်ခြင်းစသည့် ကေ-၉ မေးလ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ရရှိလာမည့် အားသာချက်များအား ဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။
မိမိ၏ရှည်လျားများပြားလှသော အီးမေလ်းများအား အစဉ်လိုက်စီရန် သို့မဟုတ် တူရာစုစည်းထားနိုင်ရန် နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်မှာ မိမိစက်၏ မျက်နှာပြင် အကြီးအသေးပေါ်မူတည်၍ ဖော်ပြပေးလာမည့်ရွေးချယ်လုပ်ဆောင်စရာများအနက်မှ More Actions ထဲတွင်ရှိသော Sort By သို့မဟုတ် Sort အိုင်ကွန်ကို ကလစ်နှိပ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
Sort By ထဲတွင်တွေ့ရှိရမည့် options များမှာ Date, Arrival, Subject, Sender, Star, Read/unread, Attachments တို့ဖြစ်သည်။
ဖိုဒါများအသုံးပြုဆောင်ရွက်ခြင်းသည် များပြားလှသောအီးမေးလ်များကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရာ၌ အလွန်အသုံးဝင်သည်။ အခြားအခန်းတွင် မိမိတို့၏ အီးမေးလ်များအား trash folder နှင့် archive folder များအတွင်းသို့ရွေ့ပြောင်းခြင်းအကြောင်း လေ့လာပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် မိမိအီးမေးလ်များအား အခြားဖိုဒါများအတွင်း၌ ထည့်သွင်းလိုပါက အထက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းများနှင့် မတူညီသော နည်းလမ်းတချို့ကို အသုံးပြုလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်မှာ အီးမေးလ်တစ်စောင်စောင်ကိုဖတ်နေရင်းပြုလုပ်လိုသည်ဆိုပါက More Actions ထဲမှာ refile ကို ကလစ်နှိပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် မိမိ နှစ်သက်ရာဖိုဒါတခုခုအတွင်းသို့ ပြောင်းရန် Move သို့ Copy ကိုရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊
ထို့နောက် စာများအား ရွေ့ပြောင်းရန် ဖိုဒါတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေးရန် ဖော်ပြသည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
ဖိုဒါအသစ်တခုကို ဖန်တီးရန် မိမိ၏ အကောင့််စာမျက်နှာသို့သွားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ မိမိလုပ်ဆောင်လိုသော အကောင့်၏ဘေးရှိ ဖိုဒါပုံအိုင်ကွန်လေးကို ကလစ်နှိပ်ရပါမည်။
အောက်တွင်ပြထားသောပုံတွင် မိမိအကောင့်အတွင်းရှိ အခြားဖိုဒါများ၏ စာရင်းကိုဖော်ပြပေးထားပါသည်။
လတ်တလောအချိန်တွင် ကေ-၉ မေးလ်တွင် ဖိုဒါအသစ်ပြုလုပ်ရန် options မပါရှိသေးသောကြောင့် မိမိ၏ ၀ဘ်မေးလ်ဆက်တင်တွင်သာ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
မိမိအနေဖြင့် အီးမေးလ်အသုံးများပြီး နည်းလမ်းပေါင်းစုံဖြင့် အသုံးပြုသူဖြစ်သောကြောင့် မိမိအကောင့်အတွင်းရှိ ဖိုဒါတခုခုအတွင်း၌သာ အီးမေးလ်များအား စစ်ဆေးခြင်း၊ ဖတ်ရှုခြင်းနှင့် ဒေါင်းလုပ်ဒ်ရယူခြင်းမျိုး ပြုလုပ်လိုပါက ကေ-၉ က ထိုသို့ အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဥပမာအနေဖြင့်ဆိုရလျင် မိမိအနေဖြင့် email lists များစွာကို ရယူထားပြီး ၄င်းမေးလ်းများကို မိမိအန်းဒရွိုက်အတွင်း၌ မတွေ့မြင်လိုပါက မိမိအသုံးပြုသော ၀က်မေးလ် options တွင် အလိုအလျှောက်စီစစ်၍ Email Lists ဖိုဒါထဲသို့ထည့်သွင်းပေးရန် ဆက်တင်ပြုပေးထားခြင်းဖြင့် ကေ-၉ အနေဖြင့် အီးမေးလ်များကိုစစ်ဆေးသည့်အခါ၌ ၄င်းတို့ကို ထည့်သွင်းခြင်းမပြုပဲ ဖယ်ထုတ်ပေးထားမည်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့လုပ်ဆောင်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို ဤလက်စွဲစာအုပ်တွင် အကျယ်ဖော်ပြပေးရန်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့် လုပ်ဆောင်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို အတိုချုပ်ဖော်ပြပေးရမည်ဆိုပါက မိမိ၏ဖိုဒါဆက်တင်တွင် ပထမ သို့ ဒုတိယ စသည်ဖြင့် ဖိုဒါအမျိုးအစား ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဥပမာအရ Email Lists ဆိုသည့် ဖိုဒါကို ဒုတိယအမျိုးအစားအနေဖြင့် သတ်မှတ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ဆက်တင်ပြုလုပ်ရန် ဖိုဒါများအားဖော်ပြပေးထားသောနေရာသို့ သွားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ More Actions အိုင်ကွန်ထဲမှ Setting ကိုရွေးချယ်ပြီး၊ ၄င်းအထဲရှိ Folder Settings ကို ထပ်မံရွေးချယ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
Folder options ထဲတွင် အခြား options များ၏စာရင်းကိုတွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ထိုအထဲတွင် Display သို့မဟုတ် sync စသည်ဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
Folders များနှင့် Classes များအကြောင့်ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဖော်ပြပါ ကေ-၉ ၀က်ပေ့ဂ်ျစာမျက်နှာတွင် ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။ https://github.com/k9mail/k-9/wiki/WorkingWithClasses
ကေ-၉ မေးလ်တွင် Folder Settings၊ Account Settings နှင့် Global Settings စသည့် ဆက်တင်အဆင့် သုံးမျိုးရှိပါသည်။ ယခုဖော်ပြမည့်အပိုင်းတွင် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သောဆက်တင်များ ပြောင်းလဲပြုပြင်ရန် လုပ်ဆောင်ပုံများကို ခြုံငုံဖော်ပြပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ အခြားဆက်တင်များအကြောင်းကို မိမိဘာသာထပ်မံလေ့လာစေလိုပါသည်။
အကောင့်ဆက်တင်ကိုအသုံးပြုရန် မိမိပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း (configuration) လိုသော အကောင့်အတွင်းရှိ Folder list ရှိရာသို့သွား၍ More Actions အိုင်ကွန်ကို ကလစ်နှိပ်ရွေးချယ်ရပါမည်။ ထို့နောက် ၄င်းအထဲရှိ Setting ထဲမှ Account Settings ကို ရွေးချယ်ပေးရပါမည်။
ဤနေရာတွင် အရေးကြီးသောအပိုင်းများမှာ Fetching mail နှင့် Sending mail စသည့် options တို့ဖြစ်ပြီး ၄င်းတို့ထဲတွင်လည်း မိမိစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနိုင်သော ဆက်တင်များပါရှိပါသည်။ ပုံတွင်တွေ့ရသော section များ၏ အကြောင်းအရာအနှစ်ချုပ်ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
General Setting သည် Default အကောင့်ဖြစ်သည့် ဤအကောင့်အမည်နှင့် အရောင်စသည်တို့ကိုဖော်ပြပေးသည်။
Fecthing Mail သည် မည်သည့်ဖိုဒါအမျိုးအစားကို စစ်ဆေးမည်နည်း၊ မည်မျှကြာလျင် တခေါက်ထပ်မံ စစ်ဆေးမည်နည်းဆိုသည်များကို ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ဖြစ်ပြီး၊ အ၀င်စာများကို စီစဉ်ဖွဲ့စည်းဖော်ပြပေးသည်။
Sending Mail တွင် (အကောင့်တွင်ဖော်ပြမည့်) နာမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်တွင်ထည့်သွင်းမည့်လက်မှတ်၊ မက်ဆေ့ခ်ျ format (Plain text သို့မဟုတ် HTML စသည်) ၊ CC နှင့် BCC တွင်ထည့်သွင်းထားသည်များကို ဖော်ပြပေးမပေးနှင့် အထွက်စာများဖြစ်အတွက် (SMPT) ဆက်တင်များကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Folders တွင် မည်သည့်ဖိုဒါအမျိုးအစားများကို ဖော်ပြပေးခြင်းနှင့် ရှာဖွေခြင်းပြုလုပ်မည်၊ မည်သည့်ဖိုဒါများကို draft၊ sent၊ spam နှင့် trash folder အဖြစ်သုံးမည်ကို စီစဉ်နိုင်သည်။
Storage သည် internal သို့မဟုတ် external stoage ကိုအသုံးပြုသည်။
Notifications သည် စာအသစ်ရောက်သည့်အခါများတွင် status bar တွင် အသိပေးဖော်ပြခြင်း၊ တုန်ခါခြင်း နှင့် စာအသစ်ရောက်သည့်အခါသုံးသည့် ringtone များကို လိုအပ်သလိုစီစဉ်နိုင်သည်။
Seach က မေလ်းဆာဗာ၌ ရှာဖွေခြင်းပြုလုပ်နိုင်ရန်စီစဉ်ပေးပါသည်။
အီးမေးလ်များကို ကြည့်ရှုရန် ဖွဲ့စည်းပြင်ဆင်ခြင်း
မိမိအနေဖြင့် မိမိဖုန်း၏ဖိုဒါထဲတွင် မက်ဆေ့ခ်ျမည်မျှလက်ခံထားမည်နည်းဆိုသည်ကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုခြင်း ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ default အနေဖြင့်လက်ခံပေးမည့် စာအရေအတွက်မှာ ၂၅ စောင်သာဖြစ်သဖြင့် အတော်နည်းသော အရေအတွက်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်မိမိစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနိုင်ရန်အတွက် Account settings ရှိ Local folder size တွင်ပြုပြင်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။